Baarlamanka Soomaaliya oo meelmariyey miisaaniyadda 2015 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel-mariyay miisaaniyadda sannadka 2015-ka ay dowladdu ku shaqeyn doonto, taasoo ay maalmihii lasoo dhaafay ka doodayeen.
Kulanka Barlamaanka oo uu maanta shir guddoominayey gudomiye ku xigeenka kowaad Barlamaanka Jaylaani Nuuur Iikar ayaa ka hor ansiinta waxaa warbixinta ku aadan wax ka badel lagu samaeeyey Miisaaniyadda sanadka 2015-ka laga dhegeystay Guddiga Maalliyadda ee golaha Barlamaanka.
Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh, guddoomiyaha guddiga Maalliyadda Barlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in gudigu kulamo ay la yeeshey mas’uuliyiinta Wasaarada Maalliyadda iyagoo kala hadlay qodobadii Xildhibaanada ku taliyeen in wax laga bedelo.
Xoghayaha guddiga Maaliyadda Barlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ka hadalayey ahmiyadda ay leedahay ansixinta Miisaaniyadda dowlada ee sanadka 2015 oo tiro ahaan gaaraysa USD 239.9 Milyan dollar.
Dhegaysiga guddiga Maaliyadda ka dib ayaa loo gudagalay codaynta ansixinta Miisaaniyadda sanadka 2015-ka ee dowlada federaalka Soomaaliya oo ay goob joog ka ahaayeen Sii-hayaha Wasiiru dowlaha Wasaarada Maaliyadda Soomaaliya, C/llahi Maamed Nuur.
Waaaa Miisaaniyadda u codeeyey 148 mudane, 9 Mudane ayaa diiday, 5 Xildhibaana waa ay ka aamusay, sidaas darteed Miisaaniyadda. Ansaa Miisaaniyadda ayaa waaa ku dhawaaqay guddomiye ku xigeenka 1-aad ee Barlamaanka, Jeylaani Nuur Iikar.
Sida ka muuqanaysa warbixinta guddiga Maalliyadda Barlamaanka Soomaaliya, waxaana kula talagalka Miisaaniyadda 2015-ka oo dhan USD 239.9 Milyan, waxaa ka muuqda in Miisaaniyaddu u badan tahay kharashyada adeega maamulka taas oo looga qoondeeyay Miisaaniyadda joogtada ah USD 103.5 Milyan una dgiganata 43.1% ee Miisaaniyadda, hay’adaha adeega Difaaca iyo Amniga USD 88.3 Milyan una dhiganta 36.8% ee Miisaaniyadda, hay’adaha adeega Bulshada USD 7.8 Milyan una dhiganta 8.4% ee Miisaaniyadda iyo kuwa kale USD 20.2 Milyan una dhiganta 8.4% ee Miisaaniyadda sanadka 2015-ka ee Qaranka.
Sii hayaha xilka wasiir-u-dowlaha wasaarada C/llaahi Maxamed Nuur ayaa markii la ansixiyay Miisaaniyadda u mahadceliyay xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya.
RW Cumar oo ku baaqay joojinta colaada ka jira Hiiraan & Mudug